Samarekha.com.np :: सफलताको बाटो सकारात्मक सोंच |
सफलताको बाटो सकारात्मक सोंच
लक्ष्मी ढकाल || 1024 Views || Published Date : 12th April 2019 |
कुनै समस्या आईपर्दा हामी यसवाट पन्छिन चाहन्छौं । हामी प्रायः गरेर यसप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछांै । अगाडि रहेको समस्यालाई नकार्नुको मतलव समस्यासँग जोडिएको सकारात्मक भावनालाई पनि नकार्नु हो । हामीमा जस्तोसुकै भावना उत्पन्न भए पनि समस्याहरु आफै विलाएर जाँदैनन् । तिनीहरुले आफनो मनमा निरन्तर रुपमा आएर हामीलाई दुःखी वनाउँछन् । हामी समस्याहरुलाई अधुरो काममा अनुभवहरुको परिपे्रक्षमा हेर्ने गर्दछौ । ती अनुभवहरु मध्ये खासगरी दुः खमय अनुभवहरुले हामीमा डर, त्रास र पीडा पैदा गर्दछन् । हामी विचार गर्दछौं, यदि यसलाई मैले समाधान गर्न सकिन भने के गर्ने ? हामी अभ्यस्त भइसकेका छौ कि म यसलाई समाधान गर्न सक्दिन । मेरा लागि यो असम्भव छ । प्रयास नगरीकनै हामी छोडिदिन्छौ । हामी प्रायः नकारात्मक मनोभावनावाट परिचालित हुन्छौ । आफनो कमजोर पक्षको मात्रको हामी बढी विश्लेषण र चर्चा गर्दछौ, जसले जिवनमा खिन्नता, रिस घृणा, निराशा र अन्धकार ल्याइदिन्छ ।
मानव जीवनको अन्तिम तथा मुख्य लक्ष्य सुख र शान्ति किनेर र खोजेर पनि पार्इंदैन् । यसलाई प्राप्त गर्न कतै भांैतारिनु, देश, विदेश घुम्नु, मठमन्दिर धाउनु र जंगलमा तपस्या गरिरहनु पनि पर्दैन् । आफूसँग भएको स्रोत साधन तथा ज्ञान सीप र अनुभवको सही सदुपयोग गर्न सक्नुमा नै वास्तविक अर्थको सुख र शान्ति मिल्छ । तर यी सवै प्राप्तिका लागि आफूसँग भएको साधन स्रोतलाई सकारात्मक आँखाले हेर्न र बुझन सक्नुपर्छ । सकारात्मक भावना अन्र्तगत आनन्द खुसी र सन्तुष्टि पर्दछन् । जसले हाम्रो जीवनमा ज्योतिको किरण ल्याईदिन्छ ।
यदि तपाई समस्यावाट पीडित हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम आफैलाई सोध्नुहोस् ममा कुनै समस्या छ ? यही सफलाको पहिलो पाइला हो । सफलताको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाई आफनो विगतको सफलताको वर्णन गर्नुहोस, कुनै कागजको टुक्रामा लेख्नुहोस् । यसवाट सम्वन्धित आफना आवश्यकता लगायत अरु कारक तत्वहरु, पक्षहरु एवं व्यक्तिहरुको सूची बनाउनुहोस । यति भएपछि तपाई आफनो सवल, सहयोगी पक्षहरु प्रष्टसँग देख्नुहुनेछ । जव तपाई आफनो वास्तविक अवस्था र अवसर भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ तव तपाई सफलताको नजिक पुग्नुहुन्छ । यसपछि सवभन्दा मुख्य कुरा सम्भावित उपायहरु लेखेर तपाईले आफनो विश्लेषण जारी राख्नुपर्छ । यसको लागि सिर्जनात्मक साेंचाइको आवश्यकता पर्दछ । सिर्जनात्मक हुनु भनेको कलात्मक वा नौलो कुरा पत्ता लगाउनु मात्र होइन । यो त केवल समय सापेक्ष दृष्टिकोण वदल्न सक्ने क्षमताको उपयोग मात्र हो । कतिपय अवस्थामा दृष्किोण वदल्नुले मात्र पनि अवस्था बदलिएको हुन्छ । यस्तो अभ्यासले सिर्जनात्मक उपायहरु पत्ता लगाउने उपयुक्त विचार सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । जुनसुकै समय पनि विभिन्न विकल्पहरुको छनौट गर्न सकिन्छ । प्रत्येक विकल्पका सम्भावित प्रतिफल हेरी कुन विकल्प उपयुक्त छ भनि परिक्षण गर्नुपर्छ ।
(मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ता, परिवर्तनका संवाहक शान्ति र पुनर्मिलाप कार्यक्रम, नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र)